ကိုယ့် အတွေး နဲ့ ကိုယ် .....
ဒီလိုလူတွေ ဘယ်လောက်များ ။
မူးပြီးထင်တာတော့ ဆက်ဆိုဖုန်းလဲ ဘဝပြောင်း ။
ရွှေလိုချင်တော့ ရွှေပုံမြင်တတ်ပါကြောင်း ။
forward mail ထဲ မှဒီပုံလေးကို ပြန်ကူးပေးလိုက်တာပါ ။
ဆဌမမြောက် ရက် ။
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 30 ရက် 2009 ခုနှစ် 20 နာရီ 16 မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္စျိမ)။ ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် A (H1N1) တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားသူ ၁၀ ဦးရှိပြီဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက
ထုတ်ပြန်သော်လည်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ် ညံ့ဖျင်းလှသဖြင့် ကျေးလက်ဒေသများတွင် ရောဂါကူးစက်ရန်
အခွင့်အလမ်း ပိုများနိုင်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများက ပြောသည်။
ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် A (H1N1) ကူးစက်ခံရသူပေါင်း ၁၀ ဦး ရှိပြီဟု ဆိုသည်။ သို့သော်
ထုတ်ပြန်ချက် များအရ လူတုပ်ကွေးဖြစ်ပွားသူ အားလုံးမှာ လေကြောင်းခရီးဖြင့် နိုင်ငံခြားမှ ပြန်လာသူများသာ ဖြစ်နေသည်။
အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင် A (H1N1) ရောဂါကြောင့် လူပေါင်း ၆၅ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယတွင်မူ အင်္ဂါနေ့ကအထိ ရေတွက်လျှင် ကူးစက်ခံရသူ ၄၇၅ ဦးရှိကာ တရုတ်နိုင်ငံတွင်မူ ဇူလိုင် ၂၇ ရက်နေ့အထိဆိုလျှင် ၁၉၃၀ ဦး ရှိသွားပြီ ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ A (H1N1) ဖြစ်ပွားမှုသည် ကမ္ဘာတဝှန်းတွင် ဖြစ်ပွားနေရာ၊ နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၀ အထိ ရှိလာခဲ့ပြီး၊ လူပေါင်း ၈၀၀
ကျော် သေဆုံးပြီး ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကမူ လာမည့်နှစ်အတွင်း လူသန်းပေါင်း ၂၀၀၀ အထိ
A (H1N1) တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားမည်ဟု မကြာသေးခင်က ခန့်မှန်းချက် ထုတ်ခဲ့သေးသည်။
ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများအားလုံး ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ
:kiki : at 7/31/2009 10:30:00 PM
တွေးမိပြန်ပြီ ဒီထောင် အကြောင်း။
ထောင်ဆိုတာ ကို မကြိုက်လွန်းလို့ ညအိပ်ရင်တောင် ခြင်ထောင် မထောင်အိပ်တာ အတော်ကြာပါပေါ့ ။
အိမ်ထောင်ဆိုတာလည်း ခပ်ကြောက်ကြောက် ။
ဟိုက ဒီက အတို့ အထောင် တွေနဲ့ လည်း ဝေးအောင် ရှောင်ပါခဲ့ ။
လက်မ တောင် ထောင်မိမစိုးလို့ ရိုက်ချိုးဖို့ကြိုးစားတဲ့ ဒီအချိန် ။
ယောကျာင်္းကောင်း မောင်းမ တထောင် လို့၊သံကောင်းဟစ်သူ တွေလည်း အထင်မကြီး မိပါဘူး ။
တမင်တကာ ထောင်ခြောက်ဆင်ပြီး၊ ကောက်ကျစ်ကြတဲ့ ငမိုက်သားတို့ ၊သောက်ဖြစ်မှ မရှိပေဘူး ။
ယုန်ထောင် ကာ ကြောင်မိတာလည်း မဟုတ် ၊ ညစ်ကျယ်ကျယ် အကြံတွေထုတ်တာ ။
ကျားငါးသိန်းအားက မိန်းမသားတယောက်ကို ကြောက်ဖျားကာ ခြောက်ခြား နှေတာတော့
မဟုတ်တရုတ် ကြံဖန်လုပ် ။ ကိုယ့်ရုပ်မှ ကိုယ် အားမနာ ။မတန် မရာလည်း ထိုင်ချင်သေး ။
နောက်ကြောင်းကလည်း မအေး နဲ့ ။ မသေခင်မှာ ယစ်ထားကြဒီစည်းစိမ် တွေ ။
နေဝင်ချိန် ဆိုတာ ရှိရ မှာ ပါဘဲ ။ အလှည့် ကျ မနွဲ့စတမ်းပေါ့ ။
အလှမ်းမဝေးတော့တဲ့ အခါ၊ မကြာမှီ လာမည်သေချာခိုက် ၊
ကိုယ်မိုက် သမျှ ကိုယ် ပြန်ဆပ်ရဦးမည် မို့ ၊၊
ကိုယ်စိုက် သမျှ ကိုယ် ပြန်ရိတ်ခါသွား
ဘဝတောင် မခြားစေဘဲ ၊ လည်လိမ့်မယ် ဒီဝဋ် တွေက
နောင် သံသရာ အဆက်ဆက် ထိမှန်း ။
သေချာစွာ တွေးကြည့်ကြစမ်း ။
Prison in Austria~!
ဒီအပေါ်မှ ပုံလေးကတော့ သြစတြီးယား နိုင်ငံက တကယ်ပြစ်မှုကျုးလွန်ခဲ့ ကြတဲ့ ရာဇဝတ်သားတွေ ကို ချုပ်နှောင် ထား တဲ့ အကျဉ်းထောင် ပါတဲ့။
အကျဉ်းထောင်လို့ သာဆို ပေမဲ့ဘယ်မှာ ကျဉ်း လို့ လဲ လေ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကြီးက နေဘီဒေါ် ကြီးလောက်တော့ မကောင်းသေးဘူးတဲ့ ။ အဟေးဟေး
*$+@^!& , ♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪♪ ♪" ဒါပေမဲ့နေရာချင်းတော့ မလဲနိုင်ပါ။ မြန်မာပြည်သားတယောက် ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်ကွာ ။ အိုး လမ်းဘေးရောက်ရောက်။ ဂျေးထဲရောက်ရောက် အဖြစ်ဟာ မလွယ်ပါလား .... ♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪♪ ♪ %^(#!^+$
(စိုင်းထီးဆိုင် အမှတ် တရ )
ဦးနှောက်ထဲ ပိုးဝင်သွားခြင်း မဟုတ်ပါ ။
ဆူပွက်နေသော ဦးနှောက်များ အေးစေရန် ၊ ဆိုချင်သလို အော်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
လူအချင်းချင်း ချုပ်နှောင်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ ။
ပဉ္စမမြောက်နေ့။ နေကောင်းကြလိမ့်မည်ဟု ထင်ပါသည် ။
မမေး ။ မကြား ။မရ ။ မသိ
:kiki : at 7/31/2009 01:00:00 AM
အရမ်း အိပ်ချင်နေပေမဲ့အိပ်မရ လို့။ စိတ်တွေက ဟိုရောက် ဒီရောက် ။ဂေါက်တောက်တောက် ဖြစ်နေတာ ။ ဒီလိုလေး ငိုက်နေလို့ ရရင်လည်း ကောင်းမှာပဲလေ ။ သူငိုက်တာ ကိုယ်ကြည့် ပြီး ရယ်လိုက်မိတော့ နဂို အိပ်မရတာ ပိုဆိုးသွားတယ် ။ ဒီတော့ သူ့ လို လိုက် ငိုက်ကြည့်မိတယ် ။ လူကြီး က မတန်မရာ ကလေးဆန်ဆန် လိုက်လုပ်တော့ ဘေးလူတွေ က အရူးထင်ကြ ပြန်မယ် ။
ကြည့် ကျက် သာ လုပ် ကြ ပါတော့ ကွယ် .
စာ မ ရေး ချင် လို့ဆား ချက် မိ ပြန် ပါ တယ်။။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 29 ရက် 2009 ခုနှစ် 18 နာရီ 40 မိနစ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် A (H1N1) တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသည့် လူနာ ၂ ဦး ထပ်မံ တွေ့ရှိသဖြင့်
ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၉ ဦး ရှိသွားပြီ ဖြစ်သည်။
စတုထ္ထမြောက်ရက် .. အိမ်သားများ နေကောင်း ကြပါသည် ။
သတင်းမေး ဆုတောင်းပေးကြသူ မိတ်ဆွေများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
:kiki : at 7/30/2009 01:00:00 AM
ဦးနှောက် အနည်းငယ်ခြောက်နေတယ် ။အိမ်သားတွေ အကျယ်ချုပ်ကျ နေတာ ၃ ရက်လေးပဲ ရှိသေးတယ် ၊ ၁၃ နှစ်တောင် မဟုတ်သေးပါ ။ ၁၃ နှစ် အချုပ်ခံနေရတာ တော်ရုံလူ ဆို ရူးသွားမယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်လို့ ရတယ်။
တူတော်မောင်အတွက်တော့ လုံးဝစိတ်မပူပါ ။လူငယ်ဆိုတော့ ခံနိူင်ရည်အားကောင်းပြီးသား ။သူ့ ကို ဘယ်လိုကုသမှုတွေပေးသလည်း သိချင်လို့ဖုံးဆက်မေးတော့ ဘယ်သူမှ မသိရပါဘူး ။ ဆေးနာမည်ကို ဆရာဝန်အား မေးပေမဲ့မပြောပါတဲ့။ UN ကပေးထားတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ဆေး လို့ သာ သိရတယ်။ ထားပါတော့ ဒါက ။အရေးမကြီးလှပါဘူး ။
အရေးကြီးတာက မာတာမိခင်ကျေးဇူးရှင် ။ နဂိုကတည်းက နှလုံး သွေးတိုးရှိပါတယ် ။ဆေးကို ပုံမှန် သောက်နေပါတယ် ။ ဒီည ရင်ဘတ်အောင့်တယ် ။နှာစေးတာကတော့ တပတ်လောက်ရှိပါပြီ ။ ချမ်းတယ် တုန်တယ် ဆိုတော့ အဖျားရှိလာနိုင်တဲ့ လက္ခဏာပါ ။ ဒီတော့ သူ့ ကိုပြောပါတယ် ။ နေမကောင်းရင် ဆရာဝန်ပြပါဆိုတော့ ခုနေပြရင် ဟို နေရာကို ပဲသူ့ ပါခေါ်သွားမှာ တဲ့။ အဲလိုတွေးတယ်ပေါ့ ။ ဒါဆို ညရေးညတာ နှလုံးရောဂါ ပြန်ထနေရင် ဘယ်လိုလုပ် မလည်းဆိုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘယ်မှ မသွားရဘူးတဲ့ ။သူတို့ ကို အကြောင်းကြားပါတဲ့ ၊သက်ဆိုင်ရာကလူတွေ လာအောင် ဘယ်လောက်ကြာကြာစောင့်ရမလည်း။ ဘယ်သူမှ ချက်ချင်းရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလည်း တဲ့။
အမေ့ ကို ပြောပြလိုက်ပါတယ် ။ ကိုယ်က ဘာမှ ပြစ်မှု ကျုးလွန် ထားသူ မဟုတ် ။ ကိုယ့်အသက် က ပို အရေးကြီးတယ် လို့။ အဲလို အရေးအကြောင်းဖြစ်လာရင် ဘာမှ ဂရုစိုက် မနေနဲ့လို့။ သွားသင့်တဲ့ ဆိုင်ရာဆေးရုံသာ အရောက်သွားပါ လို့။ နောင်ဖြစ်လာမဲ့ ပြသနာ နောင်မှ ရှုင်းမယ် လို့။ အင်း ဘာဥပဒေတွေ ထုတ်ပြီး စွဲချက်တင် မလည်းတော့ မပြောတတ်ပါ ။
နှလုံးရောဂါ ထ နေတဲ့ သူ တယောက်ကို ဝေဘာဂီ ခေါ်သွားလို့ ရမလား ။
တကယ်လို့ဒီ အိမ်သား ထဲ က နောက် တဦး ထပ်ဖျားရင် နောက်ထပ် ၁၀ ရက်စီ ထပ်တိုး ပြီး အကျယ်ချုပ် လား ၊။ ခု အဲ လို သဘောမျိုး ဖြစ်နေတော့ ....
ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာ သား များအားလုံး ကျန်းမာကြပါစေ ...
( တကူးတက အချိန်ပေး စာဖတ် ဆုတောင်း ပေးသွားကြသူ များ အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း )
ခုလောလောဆယ် ပျော်ရွှင်ဇိမ်ကျ နေသူ ၂ ဦးတော့ အိမ်မှာ ရှိနေပါတယ် ။တူလေး အငယ်ဆုံး နဲ့ တူ မလေး တို့က ကျောင်းမသွား ရ လို့ပျော်နေကြတယ် တဲ့ ။ ပြီးတော့ သူ တို့ ရဲ့သူငယ်ချင်းလေးတွေ က သူတို့ ကြည့်ဖို့ဗီဒီယို ခွေများ နှင့် စားစရာတွေ ကို အောက်က အစောင့်ဆီ မှ တဆင့်ပို့ ပေးကြလို့အတော် ဇိမ်ကျ နေ တယ်တဲ့။ အင်းလေ ။။ ဒီလိုဆိုတော့ လည်း ကလေး ဖြစ်နေတာ မှ ကောင်းသေးရဲ့ ။ဘာမှ အပူအပင် မရှိ ဘူး ပေါ့ ။
နောက်တချက် ... သေချာသိရမှ ပြောပါတော့မည် ။ သူတို့ ကြောက်တတ်ကြပုံများ လေ...ဆန့် တငင်ငင်ဖြစ်အောင် ထားခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါ ။ :(
:kiki : at 7/29/2009 12:20:00 AM
ကိုယ့် သတင်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရေးတင်ရတာ တော့ သိပ်မကောင်းသလို ပါပဲ ။ ဆန့် တငင် ငင် နဲ့ မတင်မကျ
လည်းဖြစ်နေသေးရဲ့ ။ အဆက် အစပ် မရှိ ဖြစ်မှာလည်း စိုးရဲ့။ စိတ်ထဲ မှာ ပြောပြချင်တာတွေ ကို ဒီလက်က
လိုက်မရေးနိုင် လို့စာဖတ်သူတွေ အတွေးတမျိုး ပေါက်မှာလည်း စိုးရဲ့ ။ အဲလိုဆိုရင်တော့ ကိုယ့် အရေးညံ့ ဖျင်းမှု
ကြောင့် လို့ ပဲ သဘောထားပေးကြပါ ။ ရင်ထဲမှာ ပြောပြချင်နေတာတွေက များပြီး လိုရင်း မရောက်ခဲ့ ရင် သဘော
ပေါက်ပေးကြစေလိုပါတယ် ။ ဒီလိုပါ ။
ဝက်တွေ အထင်လွဲခံနေရတဲ့လူတုပ်ကွေး A H1N1 အကြောင်း နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ် ။ ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့
ပြန့် ပွားပုံ ၊ ရောဂါ လက္ခဏာများ ၊ ကာကွယ်ပုံ ၊ ကုသပုံ စသဖြင့် ကို လူတိုင်းလိုလို ဖတ်ရှိ ပြီး ဖြစ်မယ် ထင်လို့ 
အရှည် မပြောတော့ပါ ။ ခုဆို မြန်မာပြည်မှာလည်း ဒီရောဂါကူးစက် ပြန့် နှံ့ နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ 
ရက်သတ္တပါတ် အနည်းငယ်မှာ အစိုးရက တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာ ခဲ့ ပါတယ် ။
ပထမဦးဆုံး လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ခြင်းခံရတဲ့ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၃ နှစ်သမီးလေးက စင်ကာပူ မြို့ မှ ရန်ကုန်မြို့ 
သို့ပြန်လာသူ ဖြစ်ပါတယ် ။ ရောဂါ ကူးစက်တဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း လေယာဉ်ပေါ်မှာ ရောဂါရှိသူရဲ့ချောင်းဆိုး ချိန်မှာ
လေထဲသို့လွင့်ပါလာတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုး မှ ကူးစက်ခြင်းဆိုတာ ရှင်းပါတယ် ။
ခုလည်း လပ်ကီးဆဲဗင်း ခွန်နှစ်ယောက်မြောက် ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူအဖြစ် ကိုယ့် အိမ်က တူလေး ထီပေါက်
သွားပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ခုချိန်ထိ သိရသလောက် သတင်း အရ ၆ ယောက်သာ ရှိ နေပါတယ် ။
သူက ဘန်ကောက် ကို ၂ ပါတ် သွားလည် တယ်တဲ့ ။ဒီလ ၁၆ ရက်နေ့ မှာ ထိုင်းအဲယားဝေး ကြီးနဲ့
မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာတယ်ပေါ့ ။သူနဲ့ အတူ လေယာဉ် တစီးထဲ စီးလာသူတွေထဲမှာ အော်ဇီက ပြန်လာတဲ့ 
လူငယ် တဦး ပါလာတယ် ။ ဖျားနေမှန်း အစက မသိကြလို့ လား ။ ပေါ့လျော့ မှုလားတော့ သေချာ မသိပါ ။
အော်ဇီပြန် လူငယ် ဟာ တခြားခရီးသည် တွေနဲ့အတူ ရောနှောထိုင်လိုက်လာတယ်ပေါ့ ။မင်္ဂလာဒုံ လေယာဉ်ဆိပ်
အရောက်မှာ သူ့ မှာ အဖျားရှိနေကြောင်းသိရလို့သက်ဆိုင်ရာက သက်ဆိုင်တဲ့ နေရာကို ပို့ ပေးလိုက်တယ် လို့
၂၁ ရက်နေ့ မှာ စပြီး တူတော်မောင်က ဖျားတယ် ၊လည်ချောင်းနာတယ် ၊ နှာစေး ချောင်းဆိုး ပေါ့လေ ။
ဒီတော့လည်း ထုံးစံအတိုင်း ပါရာလေးသောက်လိုက် ၊ဘာမီတွန်လေး မြိုလိုက်နဲ့ပေါ့ ။ရိုးရိုးကွေးတဲ့ အီကြာကွေးပဲ
မှတ်နေတာကိုး။ ဒီလိုနဲ့ မသက်သာဘူးတဲ့။
၂၄ ရက်နေ့ မှာ အက်စ်၂လုံးနဲ့စီနေတဲ့ SSC ဆိုတဲ့ ဆေးရုံမှာ သွားပြပါတယ် ။နိုင်ဂံဂျားပြန် လာတဲ့သူ ဟုတ် မဟုတ်
မေးလို့ သာပြောတာဖြစ်မယ် ။ ဒီတူတော်မောင်က တလုံးမေးမှ တလုံးဖြေတတ်တဲ့အကောင် ။ အူကြောင်ကြောင်ပါ ။
( ဒီမှာလည်း အဖျား 38.5C အထက်ရှိတဲ့ လူနာတိုင်းကို တပါတ် ၊ ဆယ်ရက် အတွင်း ပြည်ပခရီးထွက်ဖူးလား
ဆိုတဲ့မေးခွန်းက မမေးမနေရ ပါ ။ကောင်းသော ရာဇဝင်ယူနည်းလေးတခုပါ )။နိုင်ဂံဂျားက ပြန်လာတယ်လည်း ဆိုရော ၊
အဲဒီ SSC က တာဝန်ကျ ဆရာဝန်က သူ့ ကိုပြောပါတယ် ။ နောက်နေ့ ကျရင် ဒီဆေးရုံကို ဆက်လာစရာ မလိုတော့ပါဖူး တဲ့ ။
တူတော်မောင် ငကြောင်ကျားက ဘုမသိ ဘမသိ သူ့ ဟာသူ အိမ်ပြန်လာတယ် ။ အိမ်ရောက်တော့လည်း ဘယ်သူ့ ကိုမှ
မပြော ၊ သူ့ ဟာသူ ထုံးစံအတိုင်း နေတယ် ၊စားတယ် ။ အိမ်ကလူတွေ ကလည်း မမေးကြဖူး နဲ့တူပါတယ်။
၂၅ ရက်နေ့နေ့လည် မတိုင်မီ မှာ မြောက်ဥက္ကလာပ မှာ ရှိတဲ့ နာမည်ကြီး ဝေဘာဂီ ဆေးရုံမှ ဆရာဝန် မ တဦးနှင့် 
သူနာပြုဆရာမ တဦး အိမ်တိုင်ရာရောက် ပေါက်ချလာပြီး လူနာကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်ရှုပေးပါတယ် ။
ပြီးတော့ ဆေးရုံတက်ဖို့ ပြောပါတယ် ။ နောက်များမကြာမီ ကျန်းမာရေးဌာန မှ တာဝန်ရှိသူများ (လူဦးရေ တိကျတော့
မသိ ၊ ဖုံးနဲ့ သတင်းယူရတာ လိုင်းမကောင်း၍ လုံးစိပတ်စိ မမေးဖြစ်သော မေးခွန်းများ ကျန်ရှိနေတာကို နားလည်ပေးကြပါ ) ၊
လူတပြုံကြီး ရောက်လာပြီး ဝေဘာဂီ ခရီးစဉ်ကို စတင်ပါသည် ။
( ဤနေရာတွင် ဖေါ်ပြလိုသည်မှာ ထောင်မြင်ရာစွန့် လို့ မသိရခင်မှာတင် မိမိအိတ်မှ တိုင်စီဖိုး စိုက်ထုတ်ပြီး
ထိုသူတွေကိုပါ ခေါ်ဆောင်သွားရခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။အမ်ဗြူးလဲန့် ဖြင့် လူနာကို တင်ဆောင်သွားခြင်းမဟုတ်ပါ ။
ထိုလူတအုပ် အိမ်ကို မည်သို့မည်ပုံ ဘာစီးတော် ယာဉ်ဖြင့်ရောက်လာကြကြောင်း မသိပါ )။ဆေးရုံသို့ မျက်နှာငယ်ဖြင့်
လိုက်သွားရမည့် အူကြောင်ကြောင် တူတော်မောင် နှင့်အဆက်အသွယ် လုပ်နိုင်ရန် ရှိစုမဲ့စု ဟံန်းဖုံးလေးတလုံး ကို
တောင် ယူဆောင်ခွင့် မပြုပါတဲ့ ။ ဘာလို့မှန်းတော့ မသိပါ ။ လူတုပ်ကွေး က ဝက်တုပ်ကွေးကို ပုန်ကန်မည့် သတင်းများ ကို
အိမ်သားတွေတောင် မသိစေချင်လို၍ များလားဟု စုံထောက်တွေး လေး တွေးမိပါသေးသည် ။နောက်တော့ အိမ်ကို
ကျန်းမာရေးဌာနမှ လူတွေရောက်လာပြန်ပြီး မည်သို့ မည်ပုံ နေထိုင်ကြရန် ၊ သန့် ရှင်းရေးလုပ်ရန် အစရှိသည်တို ကို
ပညာလာပေးသွားကြောင်း သိရပါသေးသည် ။
၂၆ ရက်နေ့ မှာ အိမ်သားတွေကို အကြောင်းကြားချက်က ဖုံး ပေးချင်လျှင် လာပေးလို့ ရတဲ့အကြောင်း
သတင်းကောင်းကဲ့သို့ အကြောင်းကြား၍ အဆိုပါ မယူရ ဆိုတဲ့ ဖုံးကို တကူးတက ထပ်သွားပေးရပါသည် ။
အဝတ်နှင့် အစား လည်းပေးလို့ ရပါသည် ။ လူနာကိုတော့ တွေ့ ခွင့် မရပါ ။သီးသန့် တယောက်ခန်းထဲ မှာ
ထားပေးပါသည် ။ အဲယားကွန်းနှင့်ဇိမ်ကျ ပါသည် ။ တနေ့ ကို အစာ ၄ ကြိမ် ကျွေးပါသည် ။ ဆရာဝန်က တနေ့ လျှင်
၂ ကြိမ် လာကြည့်ပါသည် ။ သွေးအဖြေကိုတော့ ၂၆ ရက်နေ့နေ့ လည်ပိုင်းမှာ သိရပါသည် ။
သိန်းထီပေါက်သွားပါသည် ။ A H1N1 Positive ဆုကြီးကို TG အဲယားလိုင်းမှ ပရိုမိုးရှင်းပွဲမှာ အလကား
အထူးခြားဆုံး သတင်း က ခုမှ ရောက်ပါတယ် ။ အိမ်သားအားလုံး ၁၀ ရက်တိတိ အိမ်အပြင် မထွက်ရပါ ။
ဒါကြောင့် တူတော်မောင်က ဆေးရုံပေါ်မှာ ။ အိမ်သားတွေ အားလုံး အိမ်ထဲ မှာ ၊ ဘယ်သူမျှ အဝင် အထွက် မလုပ်ရ ပါ တဲ့။
( ဒါကလည်း လက်ခံလို့ ရပါတယ် ။ တကဲ့ကို ဆိုးဝါးလှတဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေ ပြန့်ပွား နေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ
ဒီလို Quarantine နည်းမျိုးကို တကမ္ဘာ လုံး မှာ ကျင့်သုံးကြရတဲ့ နည်းလမ်းတခုပါ ။ ထောက်ခံပါတယ် ။
ဒါမှ ရောဂါလက္ခဏာ ပုန်းကွယ်နေဆဲ Incubation Period မှာ တင် တခြားသူတွေ ကို မပြန့် ပွားအောင်
ထိန်းချုပ်ပေး နိုင် မှာပါ ။ )
အထူးဆန်းဆုံး အကြောင်းအရာ ကတော့ ရီရမလား ၊ ငိုရမလား လို့ကိုယ်တိုင်တောင် မဆုံးဖြတ်တတ်
နိုင်လောက်အောင် ၊ နားရှိလို့သာ ကြားလိုက်ရတယ်ဆို တာမျိုး ပါပဲ။
အစိုးရ ။ ကျန်းမာရေး ဌာန မှ ဒီရောဂါဖြစ်ပွားလို့ အိမ်ထဲ မှာ ပိတ်လှောင်ခံထားရတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ဒီ ၁၀ရက်
အတွင်း စားရေးသောက်ရေးအတွက် ကို ငွေ တစ်သိန်းကျပ်တိတိ ထောက်ပံ့ပါ တယ် တဲ့ ။
ဒါပေမဲ့ ဒီငွေ ကို လက်ဝယ်မြင်ရတာတော့ မဟုတ်ပါ ။ ရပ်ကွက် ကောင်စီ (ခုတော့ ဘယ်လို ခေါ်သလဲ မသိပါ ..
ရယက ရုံး လား ဘာလား ) အဲဒီမှာ ထားပေးပြီး အိမ်က လူတွေ စားချင်သော အရာများကို သူတို့ မှ တဆင့်
ဝယ်ယူ ပို့ ဆောင်ပေးပါမည်တဲ့။
အိမ်သားတွေ တော့ ဒီကနေ့ဒုတိယမြောက် နေ့ အိမ်ထဲ မှာ အချုပ်နှောင်ခံ ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
တူတော်မောင်တော့ဆေးရုံ မှာပါ ။ နေကောင်းပါစေလို့ ပဲ ဆုတောင်းပေးနေရ ပါတယ် ။
ခုပြောမဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကတော့ ကိုယ့်ထင်မြင်ယူဆချက် သက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဖြစ်သင့် တယ်ထင်တဲ့ 
ဖြစ်စေချင်တာလေးတွေ ကို ပါ တင်ပြထားတာမို့ရောထွေး ပြီး မရှင်းမလင်းဖြစ်သွားခဲ့ရင်တော့ ဒီစာရေးသူရဲ့ 
ညံ့ဖျင်းမှု သာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီ A H1N1 တုပ်ကွေး တွေ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄လ လောက်ကတည်းက မက်စီကို နိုင်ငံမှာ စတင် ပြန့် ပွားခဲ့တာ ခုဆို တကမ္ဘာလုံး
အတိုင်းအတာ နဲ့အနှံ့ အပြား ဖြစ်နေကြ ပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း စတင်ပြန့် နှံ့ နေပြီဖြစ်ကြောင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့၃ ပတ်လောက်မှ စတင်ပြီး တရားဝင် ထုတ်ပြန်
ကြေငြာ ပေးခဲ့ ပါတယ်။ ခုချိန်ထိ လူ အသေ အပျောက် လုံးဝ မရှိသေး ပါ ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် A (H1N1) ၀က်တုပ်ကွေး ရောဂါကုသဆေး ဖြစ်သည့် တမီလ်ဖလူး (Tamilflu) ဆေးနှင့်
သာမန် ရာသီ တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ဖြစ်သော ဗက်ဆီဂရစ် (Vaxigrip) ထိုးဆေးများမှာ ၀ယ်ယူ
အသုံးပြုသူများ ပြားလွန်းသည့်အတွက် ဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားပြီး ပစ္စည်းပြတ်လပ် နေကြောင်း ။
အစရှိတဲ့သတင်းကို ဒီနေရာ မှာဆက်ဖတ်နိုင်ပါတယ် ။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ၀က်တုပ်ကွေး ရောဂါ (H1N1) ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး အတွက် ပြည်ပမှ ပြန်လာသူများအား
မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက် အာဏာပိုင်များကို စောင့်ကြည့်ခိုင်းမှုများ ပြုလုပ်နေ ကြောင်း အစရှိတာတွေ ကို ဒီနေရာမှာ
အဓိက ပြောချင်တာကတော့ အမှန်တကယ်ဆို ဒီ လုတုပ်ကွေး ရောဂါဟာ SARS လောက်ဆိုးရွားပြင်းထန်ခြင်းမရှိပါဘူး ။
သေဆုံးတဲ့ အရေ အတွက်ကလည်း တကမ္ဘာ လုံး မှာတောင် ဒီလောက် မများပြားလှပါဘူး ။
ရောဂါဖြစ်သူတွေကို ကုပေးတာ ၊ Quarantine လုပ်တာတွေလည်း မှန်ပါတယ် ။လုပ်သင့်ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ခုလို လူနည်းစုသာ ဖြစ်နေကြတဲ့ ဒီရောဂါကို ပုံကြီးချဲ့ပြီး ကုသပေးနေမဲ့ အစား မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ်
မိုးတွင်း မှာ အဖြစ်များ ၊ အသေအပျောက်နှုန်း များနေတဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါ ကို ပိုမို ဦးစားပေး ပြီး
ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ၊ ကာကွယ်ရေးအတွက် ပညာပေးခြင်း ။ ခြင်နှိမ်နှင်းရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း ။
ရောဂါ ခံစားနေရတဲ့လူမမယ် ကလေးငယ်များအား ထိရောက်စွာ ကုသပေးခြင်း ။အစရှိတာတွေကို ပိုပြီး
ဆောင်ရွက်ပေးကြ မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်များ ကောင်းလိုက်ပါလေမလည်း ။
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ ရန်ကုန်တိုင်း တွင်သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါ ဖြစ်ပွား/ သေဆုံးမှုနှုန်းသူဦးရေ များမှာ ...
ခုနှစ်- - ဖြစ်ပွား / သေဆုံး
၂၀၀၄- - ၂၈၆၅ / ၈
၂၀၀၅ - - ၅၆၂၁ / ၄ဝ
၂၀၀၆ - - ၁၅၃ဝ / ၁၈
၂၀၀၇ - - ၄၉၄၈ / ၅၄
၂၀၀၈ - - ၃၆ဝ၄ / ၃၁
၂၀၀၉ (ဇွန်-၂၃ထိ)- - ၈၃၈ / ၆
အသေးစိတ်သိလိုပါက ဒီမှာ ဆက်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ။
ဒါတွေက စာရင်းဇယားယူလို့ ရသလောက်သာရှိတာပါ ၊ စာရင်းထဲ မသွင်းဖြစ်သောသူများဘယ်မျှ ရှိနေမလည်း
ဆိုတာ မှန်းရခက်ပါတယ် ။ဒါတောင် ရန်ကုန် တိုင်းတခုတည်းက အရေ အတွက်ပါ ။ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ နဲ့ဆိုလျှင်
ခုလို ပြောတော့လည်း လူ့ အလို နတ်မလိုက်နိုင်တာတို့၊ အလကားရတဲ့နွား သွားဖြဲ ပြီးကြည့်ချင်နေသေးတယ် တို့ 
ပြောမဲ့သူ များလည်း ရှိနေမယ်ထင်ပါတယ် ။
ခုသူတို့ ထောက်ပံ့ ပါတယ် ဆိုတဲ့ဒီငွေ တသိန်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လို ချည်နှောင်မှု မျိုး ရှိနေမလည်းဆိုတာ
တွေးမိလို့အိမ်ကို မှာထာ့းပြီးပါပြီ ။ ဒီငွေကို ဘယ်လိုမှ မသုံး ဖို့။ ဘာမှ မပတ်သက်ဖို့ပါပဲ
လောကကြီးမှာ ဘယ်အရာမှ အလကား ရယူ ခြင်းဆိုတာ မရှိကောင်းပါဘူး ။
ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ ရောဂါ ဖြစ်တဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါ နှင့်ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာ
များကို အောက်ပါနေရာများမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကို July Dream
ဒီတော့ ကိုယ့် မိသားစု မှာ လက်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အဖြစ်မှန်တွေ ပေါ် အခြေခံရင်း ၊ ဖြစ်သင့်တယ်ထင်တဲ့
အကြောင်းအရာလေးများကို တင်ပြထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ထီမျိုး တော့မပေါက်ကြစေလိုပါ ။
:kiki : at 7/28/2009 01:55:00 AM
ဒီလို ထီမျိုးပေါက်ချင်ကြလား ။
ပေါက်ချင်ရင် လုပ်ကြည့် ကြပါ ။
၁ ။ ထိုင်းအဲယားဝေးစ် ကြီးစီးပြီး မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပါ ။ TG 305 ဆို အသေချာဆုံး ဖြစ်ပါသည် ။
၂။ အဲဒီ လပျံ ပေါ် မှာ mask မတပ်ပဲ နေပါ ။
၃။ မှိုင်တိုင်တိုင် ငေါင်တောင်တောင် သူ အနားရှိ ရှေ့၃လိုင်း ။ နောက် ၃ လိုင်း နေရာမှာ ရွေးထိုင်ပါ ။
၄။ အဲဒီ ငေါင်နေသူအား မိတ်ဆက်စကား သွားပြော ပါ ။ ထို သူမှာ ချောင်းဆိုး နေလျှင် ၊ သို့ မဟုတ် ၊
ဖျားနေလျှင် ထီပေါက်ရန် ပိုသေချာ ပါသည် ။
၅။ လေဆိပ်ရောက်လျှင် မိမိ အရင် မဖျားအောင် သတိပြုပါ ( အရင်ဖျားနေရင်တော့ အိမ်မရောက်
ပဲ တခါတည်း ဟိုနေရာကို တန်းပြီး ပါသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း)
၆။ခရီးမှ ပြန်ရောက်ပြီး ၃ ရက် မှ ၅ ရက် အတွင်း အသင် ဖျားနေပြီဆိုရင် ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ စွာဖြင့် 
အက်စ် ၂လုံး နဲ့စီ နေသော ဆေးရုံကြီးသို့အပြေးကလေးသွားပြလိုက်ပါ ။ တာဝန်ကျ ဆရာဝန်အား မိမိ
ဘယ်နေ့ ။ဘယ်အချိန်က ဘယ်လပျံကြီးစီး၍ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာကြောင်း အားရ ဝမ်းသာ
သတင်းပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အသင် နှင့်အသင့်အိမ်သားများ ထီပေါက်ရန် ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းသေချာ နေပြီ
ဖြစ်ပါ သည် ။
ရ ။ အသင် အိမ်ပြန်ပြီး လိုအပ်တဲ့နေ့ စဉ် အသုံး အဆောင်များကို အဆင်သင့် ပြင်၍ အိမ်မှာ အားရပါးရ တည
အိပ်ပါ ။ ( စကားချပ် ...ရည်းစားရှိ သူများ ဟဲန်းဖုံးတလုံး ကို သူများမတွေ့ အောင် အိတ်ထဲ မှာ သေချာထဲ့ထားပါ ။
ဒါမှ ရည်းစား အထင်မလွဲအောင် ဆက်သွယ် နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည် )
၈ ။ နောက်တနေ့မနက်စောစောထပါ ။ ဘုရားရှစ်ခိုးပါ ။ အသင်ကြိုက်နှစ်သက်သော အစား အစာ များကို
အားပါးတရ စားပါ ။ ရိက္ခာ အပြည့်ယူပါ )။
၉။ အိမ်မှာပဲ ထိုင်စောင့် နေပါ ။
၁၀ ။ နေ့ လည် တွင် အသင်ထီပေါက်ကြောင်း သတင်းကောင်းပေးမဲ့သူများ တပြုံကြီး ရောက်လာပါလိမ့် မည်။
ထောင် လိုချင် ရာစွန့် ဆိုသော စကားအရ .. အသင်အိတ် အရင်စိုက်ပြီး တိုင်စီ Taxi ဖိုး အကုန် ခံလိုက်ပါ ။
ထိုသူများခေါ်ဆောင်ရာ သို့အသာတကြည် လိုက်သွားပါ ။
၁၁ ။ သူတို့ ပြုသမျှ နုနေလိုက်ပါ ။
၁၂ ။ နောက် တနေ့နေ့ လည်ဆိုလျှင် အသင်ထီ ဘယ်၍ ဘယ်မျှ ပေါက်ကြောင်း သိရပါလိမ့် မည် ၊။
နောက်ထပ် ၁၀ ရက် စာ အပိုဆု အတွက် အသင်ရော ..အသင့် တအိမ်တည်း အတူနေကြသူအားလုံး ။ ခံစား ၊
စံစား ကြရမည် ဖြစ်ပါသည် ။
ဗေဒင်မေးစရာ မလို ၊ ယတြာ ချေရန် မလို ။ တကယ်ဖြစ်ချင် တကယ်လုပ်ပါ ။ အဟုတ်ဖြစ်ရမည် ။
မနက်ဖန်ကျလျှင် .. အကျိုး အကြောင်းရှင်းပြပါမည် ...
ခုလောလောဆယ်တော့ စက်ရပ်သတင်း က ... စက်ရပ်သွားလို့ဓါတ်ဆီလည်း ကုန်သွားလို့အဆက် အသွယ်
ပြန် မရသေးပါ ။
ဆန့် တ ငင် ငင် ဖြစ်သွားလျှင် တောင်းပန် အပ် ပါသည် ။
:kiki : at 7/27/2009 03:13:00 AM
ကိုယ့်ကမ္ဘာ မှာ ကိုယ်ပြေးရင်း
ကိုယ့်ဒါဏ်ရာ ကိုယ်ဆေးဖို့ 
ကိုယ့်ကဗျာ ကိုယ်ရေးခဲ့ တာ
ဒါတွေဟာ ကိုယ့် အမေး
ကိုယ့် အတွေး ကိုယ့် အသွေးတွေ ပဲပေါ့ ။
ဘေးလူ တွေ မထိခိုက်စေဘူး ၊
တွေးပူပြီးလည်း ရှုိုက် မနေဘူး ၊
သွေးဆူပြီးလည်း မိုက်မနေဘူး ။
ပစ္စုပ္ပန်မှာ ပန္နက် မရိုက်ပါလေ ၊
ထိုက်တန်တဲ့ အနာဂတ် တွေသာ
ကိုယ့် အတွက် တိုးတက် ပိုင်ဆိုင်ပါရစေ ။
(စိတ်ဓါတ်ကျတဲ့ အချိန် ကိုယ့်အတွက် ကိုယ့် ရဲဆေး ကိုယ်ဟာကိုယ်ဖေါ်စပ်ထားတာ ...)
ပုံတွေကို google search မှ ယူသုံး ထားတာပါ ။။
:kiki : at 7/26/2009 05:09:00 PM
ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ရဲ့နှစ်စဉ်လစာ ဝင်ငွေများ
Lee Hsien Loong, Singapore (Country GDP: $235.6 billion - 2008)
Politicians in Singapore are amongst the most highly paid government officials in the world. Lee Hsien Loong, Prime Minister of Singapore earns five times more than the American President. Lee Hsien Loong takes an annual salary of $2.46 million.
Barack Obama, USA (Country GDP: $13.81 trillion - 2007)
Second on the list is the President of the biggest
economy of the world withaGDP of $13.81 trillion (2007). President Elect, Barack Obama will be getting an annual salary of $400,000 when he joins office next year.
Kevin Rudd, Australia (Country GDP: $773 billion - 2007)
Third on the list is the Australian Prime Minister, Kevin Rudd with an annual salary of $330,300.
Angela Merkel, Germany (Country GDP: $2.585 trillion - 2006)
The first lady chancellor of Germany, Angela Merkel receives an annual salary of € 242,000 (€ 22000 bonus included) ~ $ 307,340.
France (Country GDP: $1.871 trillion - 2006)
The French President, Nicolas Sarkozy gets an annual salary of € 240,000 ~ $ 304,800. This is after he doubled his salary earlier this year.
Canada (Country GDP: $1.274 trillion - 2007)
Stephen Harper, Prime Minister of the seventh largest economy of the world, Canada recieves an annual salary of $280,000.
Gordon Brown, UK (Country GDP: $2.772 trillion - 2007)
Gordon Brown, Prime Minister of the second
biggest economy in Europe and fifth largest in the world receives an
annual salary of € 187611 ~$238,266.
Vladimir Putin, Russia (Country GDP: $2.076 trillion -2007)
The Russian Prime Minister recieve an annual salary of $81,190, which is significantly less than his counterparts.
The graph below showsacomparison between GDP and Salaries of heads of Top Nations.
အပေါ်က သတင်းတွေဟာ .....
ဒီနေရာ မှ ရယူထားတဲ့ အချက် အလက်လေး ပါ ။
နှိူင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် အမေရိကန် ပြည်က တိုင်းပြည်၏ စုစုပေါင်းထုတ်ကုန်ပမာဏ -Gross Domestic Product (GDP ) အများဆုံး ဖြစ်ပေမဲ့ လစာကျတော့ GDP အနည်းဆုံး စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ် က လစာ အများဆုံး ရပါတယ် တဲ့ ။
မြန်မာပြည်ရဲ့ဂျီဒီပီ က ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသားတဦး တနှစ်ဝင်ငွေ (၃၄၉,ဝဝဝ) ကျပ် ရှိပြီး ရန်ကုန်သားတဦး တနှစ်ဝင်ငွေ (၆၃၅,၆၆၈) ကျပ် ရှိကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၉ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် UMFCCI မှာ ပြုလုပ်သည့် စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း (၁၅) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အစည်းဝေး ပွဲမှာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေက ထုတ် ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဒါလေးကတော့ ဒီနေရာက ရတဲ့ သတင်းလေးပါ ။
( အဲလို ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးရဲ့ ပျမ်းမျှ တနေ့ ဝင်ငွေ ဟာ အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာတောင် မရှိရှာပါဘူး )
ကဲ အကြီးဆုံးကြီး ကို ကြည့် ရအောင် ။
မြန်မာပြည်မှ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ၏ လစာငွေ မှာ တလလျှင် မြန်မာ ကျပ်ငွေ ၁၂ သိန်းမျှ သာ ဖြစ်ပါသည်။
အဟက် ..ကလေးဆန်ဆန်ပဲ တွက်ကြည့်လိုက်ပါမယ် ။
၁၂ သိန်း x၁၂ လ = တနှစ်ဝင်ငွေ ၁၄၄ သိန်းကျပ်
ဒေါ်လှ ပေါက်ဈေး အမေဒစ်ကန် ၁ ဒေါ်လာ= ၁၀၀၀ ကျပ် ...( အတက်အကျ ရှိမှာပေါ့နော် .. )
၁၄၄၀၀ US$ ... ဟင် .. ဂလောက်ပဲ ရတာ တဲ့လား ? ? ? ( စလုံး က ပီအမ်ကြီးဆိုရင် တနှစ်ကို ၂.၄၆ မီလျှံ ယူအက်စ် ဒေါ်လာ တောင် ရတာတဲ့ )
သူ့ ခမျာ တိုင်းပြည်ကြီးတခုလုံးရဲ့ဝန်ကို ပင်ပင်ပန်းပန်း ထမ်းထား ပြီး ရတဲ့လုပ်အားခ က ....
သူ့ မြေး အကောင်းစားလေး ဘော်လုံး တပွဲ စာတောင် မရှိပါလား ။
သူ့ တော်ဝင် သမီး လေး ရှော့ပင် တခါထွက်စာတောင် မရှိပါလား ။
ချီးကျူးထိုက် ပါပေတယ် ။ ရတာလေးနဲ့လောက်အောင်သုံး နေကြရတာနော်
ဪ၊ သနားစရာပါလား ။
စိန်စီ​သောည လို့ ဘယ်သူတွေ ဘာလို့ ​ပြော​နေကြတာပါလိမ့်။
ကဲ ၊ မယုံချင် နေ ..... သွပ် သွပ် သွပ် ..
:kiki : at 7/25/2009 01:00:00 AM